Ngingathola yini ama-backlink aphezulu e-PR avela ezinkampanini zokuthengisa izixhumanisi?
Namuhla kungase kubonakale sengathi kuyabangela ama-SEO amaningi kanye nabathuthukisi bewebhu abanobuchwepheshe uma kuziwa engxoxweni evamile ngokuphathelene ne-quality backlinks kanye nokwenza ngcono kokusesha. Kungani? Ngoba kaningi umsebenzi wokuthola ama-backlink high PR ngaphandle kokulimaza iwebhusayithi noma ibhulogi kuwumsebenzi onzima kakhulu. Ngokuvamile, umgomo oyinhloko we-SEO ukwandisa izinga le-CTR, ukuthuthukisa i-traffic, nokuphakamisa ukuguqulwa kwewebhusayithi. Futhi uma ufuna ukuthola ama-backlink aphezulu e-PR kusuka ezinkampanini zokuthengisa izixhumanisi - kuningi lalaba bantu abaxosha "amasevisi" wabo kuwo wonke amaWebhu - nansi amanye amaqiniso abandayo mayelana nokwakha isixhumanisi esikhokhelwayo. Into yukuthi i-Google ingakwazi ukubona ngezikhathi ezithile izenzo ezisolisayo ezenzeka ngewebhusayithi yakho noma ibhulogi (i. e. , i-great masswn of backlink ekhokhelwayo ephansi, esebenzisa amahange anemfihlo, okuqukethwe kwe-spammy, nanoma iyiphi enye indlela noma izinhlelo ezikhohlisayo ze-badass I-Hat-Black ne-Gray-Hat SEO). Ukucabangela isimo esibucayi kakhulu uma uthola ama-backlink aphezulu e-PR avela kubanikeli abangenangqondo (i. e. , izinkomba ezisezingeni eliphansi, ukubhaliselwa kwezithangami ezenzakalelayo, amapulazi okuxhumanisa namasondo okuxhumanisa - a. k. a. ukuxhumanisa ukuxhumana) - konke kungase kuphele ukubhujiswa. Ngisho ukuthi iwebhusayithi yakho ingavinjelwa kusuka kusesho lwe-intanethi kanye naphakade. Ngakho-ke, ukubheka ingozi eningi ngezansi kuvela konke okumele ukwazi ngakho mayelana nokukhokha emuva, izinhlobo eziyinhloko zokuhlehlisa izinhlawulo kanye nendlela yokuzigwema, okungenani ezenzeka kakhulu.
Uhlobo Oluyinhloko Lokwehliswa Kwezinhlawulo
Ngaphambi kwanoma yini enye, ake sibhekane nayo - ezinye izigwegwe zingahle zibe yingxenye ye-traffic yakho yewebhu. zivame ukufakwa kwisayithi jikelele. Uma sicabangela ukuhlukumeza okujwayelekile kakhulu ngokuthenga noma ukuthengisa emuva kwe-backlink, kunezinhlobo ezintathu ezihlukene zokuhlelwa kwezinhlawulo - ukulinganisa okuyingxenye, ukujeziswa kwesayithi, nokuqedwa okuphelele.
Ukulinganisa okuyingxenye - kusho isijeziso sokushayela i-website noma ibhulogi phansi kwemiphumela yosesho. Kuvame ukukwenzeka lapho i-Google ithola umsebenzi ongaqondakali we-nature spammy yemvelo, evame ukuhlobene nokuphatha ngamagama angukhiye amaningi kanye nezihluthulelo - nje ukupompa ithrafikhi engaphezulu, futhi ngaphandle kokuletha noma yikuphi ukubaluleka kwangempela nokuqukethwe kwekhasi.
Isijeziso se-Site-Wide - lokho kungaba impembelelo enkulu kakhulu. Njengoba unamandla okwazi ukunciphisa isigamu se-traffic yakho yewebhu, lolu hlobo lwesigwebo sezinhlawulo selusetshenziswa kakhulu uma kuziwa ekusebenziseni ama-Backlink amaGrey-Hat, isibonelo nge-anchors ezifihliwe, okungenasisekelo noma ngisho nokuqukethwe okungenamthetho ngokugcwele njengekhemisi, ukuphinga noma ukugembula. Uma ubhekene nomthengisi wesixhumanisi sekhwalithi ephansi ethembisa ukuthola ama-backlink aphezulu e-PR kuwebhusayithi yakho - cishe kungabi nesikhathi - yisikhathi sokuthuthumela. Njengoba kungenzeka ukuthi uzophakamisa ifulegi elibomvu nge-Google bese ufaka isicelo sehlawulo.
Ukuqedela ukuqeda - kukhuluma ngokwayo. Ngisho ukuthi ukuhamba ngokuhweba ngemuva kokuhweba kungenza into ibe yimbi nakakhulu. Ngisho inkambo eyingozi kunazo zonke yezenzakalo lapho iwebhusayithi yakho noma ibhulogi isikhoxiswa ngokuhlukunyezwa kabi ngalezo zindlela zokuziphatha ezingaxhunywanga zokuqamba noma izinhlelo zokuhweba - futhi zivele zikhishwe ohlwini lokusesha. Ngokuvamile, umphumela onjalo ongajabule usondela kokubili ngesixhumanisi esiphansi sokuthengisa "izinkampani", futhi "amaklayenti" abo aphelelwe amandla Source .